လူတိုငျးအတှကျ လြှပျတဈပွကျ ကိုယျခံပညာ (ကှနျဖူးစိုးမွငျ့) | Thaing Wizard
This entry was posted in Aikido, Judo, Karate, Kung Fu, Martial Arts, Martial Arts Book and tagged ကရာတေး, ကှနျဖူး, ကှနျဖူးစိုးမွငျ့, ဂြူဒို, စာအုပျ, အာကီဒို by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.
6 thoughts on “လူတိုငျးအတှကျ လြှပျတဈပွကျ ကိုယျခံပညာ (ကှနျဖူးစိုးမွငျ့)”
sarkalay on May 31, 2013 at 1:54 pm said:
ဓါး (သို့)တုတ် သိုင်းစာအုပ်တင်ပေးစေလိုပါသည် ဆရာ။
Aung Thu Htet on May 31, 2013 at 2:17 pm said:
ဟုတ်… တင်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့တော့ ဆရာဦးချစ်သန်းရဲ့ “လျှို့ဝှက်သောဗန်တိုဗန်ရှည်နည်းများ” စာအုပ်ကို တင်ပေးမလို့ လုပ်နေပါတယ်။ မကြာခင်မှာ download ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
ယောစု on June 8, 2013 at 5:48 pm said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..အခုလို material art 0ါသနာရှင်များအတွက် တစ်ဖက်တလမ်းက အကူအညီပေးနေတဲ့ အစ်ကိုတွေကို လေးစားပါတယ်…ကျနော့်ကိုလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတ.်. gasker.yawsuu@gmail.com ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်… ကျနော်ရဲ့ဘလော့မှာတင်ဖို့ကူးယူခွင့်ပြုပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်…
Pingback: သိုင်းစာအုပ်များ အလွယ်တကူ ၀ယ်နိုင်ပြီ… | Thaing Wizard
tsl on October 26, 2014 at 4:57 pm said:
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်ကို ကရာတေး စာအုပ်တင်ပေးပါလား
LeaveaReply to sarkalay Cancel reply